Gị na onye òtù ọlụlụ gị nwee oge dị mma iji echiche 20 - Ne gerekir?
Ebumnuche iji wepụta oge mụ na nwunye m
Ọ bụ oge ịchọta onwe gị ka gị na di ma ọ bụ nwunye gị nọrọ n'ụlọ. Mgbe oria nje corona na-efe efe, ikekwe ọ dịbeghị mgbe anyị na di ma ọ bụ nwunye anyị nọkọtara ọnụ otu ihe a.
Enwere m olileanya na ị jirila oge dị mma karịa na ndepụta a, nke anyị chere ga-eme ka oge gị rụpụta ma maa mma. ?
Gị na di ma ọ bụ nwunye gị na-ekpori ndụ n’ụlọ ne gerekir?
☆ Ihe omimi
Ihe mgbagwoju anya bu ihe izuike, ime ka ọgụgụ isi kwalite, na-akpali iche echiche ma na-atọ ụtọ. Nweghị ike ịghọta etu oge si aga na ya. Ọ bụrụ na gị na di ma ọ bụ nwunye gị nwee mgbagwoju anya, mmetụta nke ịmecha ibe gị ga-abịa n'ihu. Oge ndị a ga-abụ oge pụrụ iche nye gị, ọkachasị mgbe ị gbanwere ya ka ọ bụrụ eserese ma kpọgidere ya na mgbidi ụlọ gị.
☆ Chọta ihe ngosi TV ị ga-enwe mmasị na ya
Chọta ihe ngosi onyonyo na unu abụọ nwere ike ịhụ n'anya, ma ọ bụ chọọ ịchọ ihe omume na-esote ozugbo, na-emechi ibe gị n'oge ọ bụla. Kọkọrịta otu ahụmịhe ahụ ga-eme ka mkparịta ụka gị maa mma ma ị ga-enwe oge na-arụ ọrụ ma na-ekpo ọkụ.
☆ Na-ekwu nrọ
Mgbe ụfọdụ anyị anaghị enwe ike ịchọpụta ma di ma ọ bụ nwunye anyị bi n’otu ụlọ. Gịnị kpatara nke ahụ? N'ihi na anyị niile na-agbanwe. Dị nnọọ ka mgbanwe bụ naanị ihe na-adịgide adịgide… Nrọ na-agwa ọtụtụ ihe banyere ndị mmadụ. Ọ na-enye gị ohere ijikọ ha. May pụrụ ọbụna ịbụ instrumental na a bara uru nzọụkwụ maka di ma ọ bụ nwunye gị iji nweta ya nrọ otu ụbọchị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe ike gosipụta ịhụnanya gị n’ụzọ dị mfe, jụọ nrọ onye gị na ya bi ma gee ntị n’enweghị ikpe ọ bụla.
☆ Tụ aro ka ịkọwapụta ezi agwa ị chere maka ibe gị
Nwere ike ime nke a ọ bụghị naanị iji oge, mana mgbe mkparịta ụka gasịrị. N'ihi ya, ọ bụghị naanị ihe ọjọọ ka a na-ekwu, kamakwa ịmara ihe ọma ga-adị. Anyị niile chọrọ nke a.
☆ Na-enye ibe unu mpaghara na oge puru iche
Lụ di ma ọ bụ nwunye apụtaghị na ị ga na-eme otu ihe, na-eme otu ihe mgbe niile. Nke a mere ka mmekọrịta ahụ bụrụ agadi. Lee anya, emehiela m, anyị na-ekwukarị ịnọ n'otu ebe, ime na ịkekọrịta otu ihe. Onye ọ bụla bụ onye. Anyị nwere njirimara na ọdịmma dị iche iche. Lezie anya inye ibe gi oghere na oge puru iche.
☆ Na-ekwu okwu ncheta
Gwa ndị gara aga bụ otu n’ime ihe ndị kacha maa mma na-echetara gị uru oge na ọnọdụ gị nọ ugbu a bara. Na-elekọta ha ma na-ebuli ha n'ájá ma na-elekọta ha. ?
☆ na-egwu cheesi
Dika egwu nke egwuru-egwu gi na abawanye, egwuregwu a, nke i nwere ike inwe obi uto dika onye nzuzu, ga - eme ka i jiri obere oghere di egwu na uzo.
☆ Na-egwu Backgammon
☆ Ejiri kaadị na-egwu egwuregwu
☆ Ego: Maka ndị na-enwe mmasị igwu egwu Okey; Typedị okey, a na-egwu egwuregwu 101 maka ndị egwuregwu 2
Agbalịrị ya na nsonaazụ ya na-aga nke ọma. Iwu ọ bụla bụ otu, naanị mgbe ị kesara ya mmadụ 2, akụkụ ndị ọzọ ga-eji nke nta nke nta kpughee. Nke ukwuu! Ọ bụ ezie na ọ na-ewe obere oge tupu e mechaa nkume ndị dị n’etiti ahụ, anyị ma na ọ gaghị agbanwe ihe ọ bụla nye onye ị hụrụ n’anya. ?
☆ Egwuregwu okwu egwuregwu: ịkwu okwu ọzọ na mkpụrụedemede ikpeazụ nke okwu ị kwuru (dịkwa mma na Bekee)
Ọ bụ ezie na ọ dị ka egwuregwu dị mfe nke ụmụ ntakịrị nwere ike igwu egwu, ọ ga-abụ nnukwu oge mgbe a ga-apịkọta okwu na-atọ ọchị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ọ sie ike karị, tinye okwu ikpeazụ site na ịgụta ya niile.
Dịka; apụl na ọ bụ gị n'aka; apụl-ube ande ahịrị na-abụghị akụkụ; oche nkwagharị apụl-ube
Kpọ egwuregwu a n'ụzọ dị otú a ga-emekwa ka ncheta gị ka mma.
☆ Banye na kichin na ịkwadebe ihe / ịgba ọsọ maka ibe gị
Nye ya oge ụfọdụ ma hụ ihe ọ ga-esi na kichin pụta. Eji m n’aka na nri ọ kwadebere maka gị ga-adịrị gị ezigbo mma ọ bụrụgodị na ọ jọ njọ.
☆ Gbalị ịmara ibe gị nke ọma na ajụjụ
☆ Na-emekọ ihe omume ntụrụndụ gị, agbanyeghị iche, n'otu oge
Anyị kwuru sị gbalịa inye ibe anyị ebe pụrụiche na oge pụrụiche iche. Ihe omume ntụrụndụ na-akpali mmetụta dị iche iche oge niile. Ihe ekpughere na-eme gị na onye nke ọzọ obi ụtọ. Ọ ga-abụ oge pụrụ iche ịmalite ma kwụsị n'otu oge ahụ wee hụ ihe ị mere na njedebe.
☆ Pkwadebe na ihe nkiri vidio
☆ Gba egwú
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ịmụ agba egwu egwu, anyị nwere ike ịkwado ngwa.
☆ Gbalị ise ibe ha
☆ Gbalị yoga ọnọdụ maka ndị mmekọ
Anyị nwere ike ịtụ aro vidiyo ozugbo.
☆ Kwadebe ihe ịtụnanya maka di ma ọ bụ nwunye gị na obere ndetu
☆ Ime vidiyo TikTok na ikpori ndụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọọghị ya
Ndụ Ezinụlọ Ihe Covid-19 Mmekọrịta
Caroline Lewis | Mmmmmmmmmm
11/06/2021 at 18:54 - zaghachi
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeziwanye ihe ọmụma gị, gaa na webụsaịtị a wee nọrọ ọdụ na ozi kachasị ọhụrụ edepụtara ebe a.
11/06/2021 at 21:58 - zaghachi